(၁၁) နှစ်တောင်ချစ်လာရတဲ့သူကို မွေးနေ့ဆုတောင်းပေးလိုက်တဲ့ ပန်ကိတ်ဒါဒါ - Cele Gabar
ပရိသတ်အချစ်တော် ပန်ကိတ်လေးကတော့ အနုပညာရှင်တစ်ယောက်မဟုတ်ပေမယ့် ပရိသတ်တွေရဲ့အချစ်တော် ဆယ်လီတစ်ယောက်လို့ ဆိုရမှာပါ ။ ပန်ကိတ်ကတော့ လက်ရှိမှာမြန်မာနိုင်ငံကို ပြန်လာပြီဖြစ်ပြီး အနုပညာအလုပ်တွေလုပ်နေသလို သူမရဲ့ Page ဖြစ်တဲ့ Pancake DaDa ဆိုတဲ့ Page မှာလည်း Beauty Blog လေးတွေလုပ်ပြီး ပရိသတ်အားပေးမှုအခိုင်အမာ ရရှိထားပြီဖြစ်ပါတယ် ။
လတ်တလောမှာတော့ ပန်ကိတ်တစ်ယောက် သူမအနေနဲ့ (၁၁) နှစ်တောင်ချစ်လာရတဲ့ သူကို မွေးနေ့ဆုတောင်းလေး ပေးလာခဲ့ပါတယ် ။ မွေးနေ့မှာ ပျော်ရွှင်ပါစေ အချစ်ဆုံးရေ ချစ်လာတာ ၁၁ နှစ်တောင်ရှိပြီ။Happy birthday my one and only Mr.Dope. I love you. ဆိုတဲ့စာသားလေးနဲ့အတူ မွေးနေ့ဆုတောင်းပို့စ်လေးကို သူမရဲ့ လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာထက်ကနေ ရေးသားဖော်ပခဲ့တာဖြစ်ပါတယ် ။ ပန်ကိတ်နှစ်တွေအကြာကြီးချစ်လာတဲ့သူကတော့ တခြားမဟုတ်ပါဘူး Big Bang အဖွဲ့ဝင် Tae Yang ဖြစ်ပြီး မေလ (၁၈) ရက်နေ့က အသက် (၃၂) နှစ်ပြည့်ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ် ။
ပန်ကိတ်နဲ့အတူ သူမရဲ့ပရိသတ်တွေအားလုံးကလည်း Tay Yang အတွက် မွေးနေ့ဆုတောင်းလေးတွေရေးသားထားကြပြီး ဆုမွန်ကောင်းလေးတွေတောင်းပေးထားကြတာလည်းတွေ့ရပါတယ် ။ ပန်ကိတ်နဲ့ အကြိုက်တူပြီး Mr Dope ကို ချစ်တဲ့ပရိသတ်တွေအားလုံးကလည်း မွေးနေ့ဆုတောင်းလေးတွေပေးခဲ့ပါဦးနော် ။
ချစ်သူဆီကလှည့်စားခံရဖူးတဲ့ သူတိုင်းထိရှသွားစေမယ့် ဝဋ်ကြွေးသီချင်းမှာ ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ထားတဲ့ ဘုန်းမင်းနေလ